Shanta kulan ee ugu badan ee ciyaartoy badan ee loogu talagalay Android | Androidsis
Kulamada lagu ciyaaro casrigaaga casriga ah ee Android had iyo jeer waa mid xiiso leh. In kastoo, ay jiraan wax ka dhigaya wax aad u xiiso badan oo awood u leh inay la tartamaan saaxiibbadaa. Nasiib wanaag, xulashada ciyaaraha na siiya xulashadan ayaa si weyn kor ugu kacday. Ciyaara badan oo ciyaartoy badan ayaa laga heli karaa Play Store. Iyo noocyo badan oo kala duwan, sidaa darteed waxaa jira wax loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tageynaa xulashada qaar ka mid ah kulamada ugu badan ee ciyaartoy badan ee loogu talagalay Android. Marka, haddii aad raadineysay ciyaar ku saabsan qaybtaan, waxaad awoodi doontaa inaad hesho mid ka mid ah kaas oo aad jeceshahay. Diyaar ma u tahay inaad la kulanto?
Dhammaantood waa ciyaaro na siisa suurtagalnimada inaan adeegsanno qaab ciyaartoy badan. Sidan ayaad awoodi doontaa inaad wajahdo asxaabtaada iyaga oo sidaas ka dhigaya khibradaha isticmaalaha si aad u fiican sidan. Ciyaar noocee ah ayaa liistadayada sameysay?
1 Amar iyo fowdo
2 Soo jiidasho
3 Tic Tac Suulka Online
4 Asphalt 8: hawada
5 Qiyaas heesta!
Amar iyo fowdo
Waxaan ku bilaabaynaa kulankaan oo dad badani u arkaan inuu yahay MMORPG-ga ugu wanaagsan ee laga heli karo Android hadda. Waxaan haynaa xulasho wanaagsan oo jilayaal ah oo aan kala dooran karno. Laga soo bilaabo orcs, elves ama mendel, iyo kuwo kale. Maxaa intaa ka badan, waxay na siisaa xulashooyin habeyn badan oo jilayaashayada ah. Wax shaki la'aan ka dhigaya wax ka duwan ciyaaraha kale ee Android. Waxaan ku jirnaa adduunyo khiyaali ah. Ciyaarta Waxay leedahay qaab ciyaartoy badan oo aan ku heshiin doonno taxane kale iyo qabiilooyin si loo hormariyo, loo dagaallamo loona guuleysto.
La degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. In kasta oo aan ka helno wax iibsi gudaha ah.
Dalbo & Fowdo khadka tooska ah 3D MMORPG
Mid ka mid ah ciyaaraha ugu fudud, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee aan ka heli karno qaybtaan. Maaddaama ay tahay ciyaar ku saleysan daba-galka Trivial classic, laakiin markan waxaan ka ciyaarnaa taleefannada casriga ah. Hawlgalku waxba iskama beddelin. Sidaa darteed, waxaan haynaa su'aalo ka kala socda qaybo kala duwan hadafkeenuna waa inaan si fiican uga jawaabno si aan u qabsanno jiisadan yar. Ma jiraan wax la yaab leh oo ku saabsan arrintan. Maxaa intaa ka badan, waxaan dooran karnaa qofka aan dooneyno inaan la ciyaarno oo aan ku xujeyno inay is qabtaan. Sidaas darteed shaki la'aan waxay ku abuuri kartaa qaniinyo aad u xiiso badan saaxiibbadaada ama qoyskaaga.
La degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. In kasta oo aan ka dhex helno xayeysiis.
Developer: Daraasada Tambourine.
Tic Tac Suulka Online
Mar saddexaad, waxaa na horyaalla ciyaar sida caadiga ah u fudud maadaama ay fududahay. Maaddaama ay tahay saddexda isku xigta ee nolosha oo dhan, kaas oo aan sidoo kale ku ciyaarnay warqad yar oo fasalka ku jirta. Markan waxaan ku ciyaari karnaa moobaylkeena qaab fudud. Mar labaad, waa ciyaar hawlgalkeedu aanu soo bandhigin wax lala yaabo. Dhamaanteen waan ognahay sida kulankaan loo ciyaari karo. Waxaan kula tartami karnaa asxaabteena inay ciyaar ku ciyaaraan qaabkan cusub ee ciyaarta.
La soo degsashada ciyaartan ciyaartoy badan ee loogu talagalay Android waa bilaash. In kasta oo aan ka dhex helno xayeysiis.
Asphalt 8: hawada
Mid ka mid ah ciyaaraha tartanka ugu xiisaha badan ee aan ka helno Android Way ka maqnaan kari waayeen liiska. Maaddaama ay sidoo kale na siinayso suurtagalnimada inaan ku ciyaarno qaab ciyaartoy badan oo ka dhan ah saaxiibbadeen. Naqshadeynta kulankaan shaki kuma jiro inay yihiin mid ka mid ah qodobada ugu adag, maadaama ay leeyihiin tayo wanaagsan. Wax aad uga sarreeya ciyaaraha moobiilka badankood. Waxaan leenahay qaabab tartan oo kala duwan oo laga heli karo ciyaarta. Marka waxaan dooran karnaa midka nagu habboon.
La degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. In kastoo gudaha aan ka helno wax iibsi iyo xayeysiis.
Asphalt 8: Hawada: Jinsiyadaha Tooska ah ee Degdeg ah
Waxaan liiska ku xireynaa ciyaartan xiisaha badan oo aan saaxiibadeena kula tartami karno si aan u qiyaasno heesta xilligan socota. Markaa waa kedis muusig oo aad u xiiso badan oo fudud. Markaa haddaad tahay muusig jecel, waa hab wanaagsan oo aqoontaada muusig loo tijaabiyo. Mid ka mid ah xooggeeda ayaa ah maktabad weyn oo muusig ah oo ay leedahay.
Developer: S Kediska ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan ee loogu talagalay Android